Somaliland: Madaxweyne Biixi Oo Ku Baaqay In Dagaal Lagu Qaado Mukhaadaraadka - #1Araweelo News Network
Somaliland: Madaxweyne Biixi Oo Ku Baaqay In Dagaal Lagu Qaado Mukhaadaraadka
Hargeysa(ANN)-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, ayaa ka hadlay dhibaatooyinka mukhaadaraaku ku hayo bulshada iyo sida loogu baahanyahay in dawlad iyo shacab meel looga soo wada jeesto.
Madaxweyne Biixi, wuxuu sidaa ka sheegay hadal kooban oo uu ka jeediyay saaka markii uu qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan caasimadda Hargeysa kala qaybgalay tukashada salaadda ciidal Udxaha, masjid jaamaca weyn ee Hargeysa.
Madaxweyne Biixi, isaga oo ka digaya Aafada noocyada kala duwan ee mukhaadaraadka oo caqliga bulshada saamayn xun ku yeelanaya, wuxuu yidhi,“Walaallayaal diinta, dawladda, qoyska iyo baayac-mushtarkaba waxa ilaaliyaa waa caqliga, waxana innagu soo batay fasahaad caqligii xumaynaya, haddii ummaddii caqligii laga xumeeyana, diintii, dalkii, Aakhiradii iyo adduunkiiba wuu xumaanayaa. Walaallayaal waxa inagu soo batay wax Mukhaadaraad la yidhaahdo oo khamri leh, xashiishad leh oo kiniin leh oo qofkii iyo mujtamiciiba si weyn ugu fasahaadayaan.”
Madaxweynuhu wuxuu shacabka usoo jeediyay inay gacmaha isu qabsadaan sidii dagaal wada-jir ah loogu qaadi lahaa mukhaadaraadka da’yarta dhibaatada ku haya ee mustaqbalkooda dilaya.
“Muwaaddiniinta Somaliland iyo inta Somaliland jecelba waxan ku waaninayaa in dagaalka mukhaadaraadka la wada galo, wuuna ka weyn yahay dagalku mid in gaar ahi gasho, maalin walbana waxaynu aragnaa maxkamaddi oo xukuntay waanu sii badanayaa,” ayuu yidhi madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.
Madaxweynaha, waxa ku weheliyay markii uu Salaada la tukaday shacabka xubno kamid ah golaha wasiirrada, maayarka caasimadda, taliyayaasha ciidamada kala duwan ee dalka, siyaasiyiin iyo xildhibaanno.